IZINDABA IZIMBONI |
Kungani uthi izicathulo zoboya nazo zingagqokwa kuzo zonke izinkathi zonyaka
Ngenkathi sakha izicathulo zethu besicabanga ngemvelo, yingakho sikhetha uboya njengento eyinhloko yendalo yethu. Yinto enhle kakhulu esingayinikwa yimvelo yethu, ngoba inezici eziningi ezingakholeki: Ukulawula ukushisa. Ngaphandle kwesimo ...
TOP 10 FASHION TRENDS FROM SPRING / SUMMER 2021 FASHION WEEKS
Yize kube unyaka othule emhlabeni wezemfashini, le sizini yethule imiklamo enesibindi futhi enesitayela. Ama-blazers amakhulu futhi aphethe, izikhwama eziluhlaza okwesibhakabhaka, namaski obuso obushelelezi kulawule amasonto eFeshini emasontweni ambalwa edlule. Kulo nyaka, ezinye zezinqumo ezithonya kakhulu ...
Amathrendi wombala entwasahlobo / ehlobo 2021
Intwasahlobo / ihlobo lowe-2021 kungaba isimanga esikhulu kithina. Ukuhlanganisa izitayela zekamva ezidijithali nezobuchwepheshe, imibala egqamile iyoba eyomuntu siqu futhi ibe ngeyokwengeza.Ngobuntu bemibala egqamile, kukhona namanye amathoni abalulekile maphakathi.Ngemva kwalokho, ngemuva kokuba ...